I-5 Friars House, iZiko leDolophu, i-Stafford | NguBell
Indlu esandula ukulungiswa ebekwe ngaphakathi entliziyweni ye-Stafford, idolophu yentengiso yesiNgesi.
Eli gumbi likumgangatho wokuqala libonelela ngegumbi lokuhlala / ikhitshi, amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela. Kukho i-smart TV ene-, ukufikelela simahla kwi-intanethi engenazingcingo kwaye yabucala kwindawo yokupaka isiza ukusondeza izibonelelo ezinikezelwa lolu khetho lwangoku.
Igumbi lokuhlambela: Igumbi lokuhlambela, njengalo lonke igumbi, lisanda kulungiswa, linebhafu yokuhlambela, ishawa, izinto zangasese zasimahla kunye neetawuli ezibandakanyiweyo kwixabiso.
Amagumbi okulala: Igumbi lokulala lokuqala linebhedi ephindwe kabini kunye nendawo yokuxhoma iimpahla zakho, igumbi liphuculwe ngemibala edibeneyo emnandi yokulala kamnandi ebusuku. Ibhedi enye kwigumbi lokulala lesibini ihambelana nesitayile kunye nentuthuzelo yale ndlu isebenzayo. Iibhedi ziya kwenziwa kusetyenziswa iilinen ezintsha ezimhlophe ezilungele ukufika kwakho.
4.84 · Izimvo eziyi-91
Nangona unenzuzo yombindi wedolophu kumnyango wakho indlu ihlala kwindawo ehlala ubukhulu becala ukuqinisekisa ukuba ulala kamnandi ebusuku. Nangona unenzuzo yombindi wedolophu kumnyango wakho indlu ihlala kwindawo ehlala ubukhulu becala ukuqinisekisa ukuba ulala kamnandi ebusuku.
Ipropathi ibekwe kwindawo efanelekileyo kunye neziko ledolophu yaseStafford umgama nje wokuhamba umzuzu. Apha uya kufumana indawo entsha yokuthenga esecaleni komlambo, imeko entle yobugcisa be-ODEON Luxe cinema kunye neebhari ezininzi zedolophu kunye neendawo zokutyela kunye nevenkile enkulu yasekhaya ikumgama nje wemizuzwana engama-30 ngeenyawo.